Nepali Rajneeti | ओलीको चतुर्याईः फेरि प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गर्ने
शुक्रबार , अषोज २९, २०७८
ओलीको चतुर्याईः फेरि प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गर्ने
बैसाख २०, २०७८ सोमबार ९० पटक हेरिएको
कुनैपनि बेला आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा २७ वैशाखका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएकी छिन् ।
ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्नुमा पाँचवटा मुख्य कारण छन् । ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णयबाट एकसाथ पाँचवटा सम्भावनाका लागि ढोका खोलेका छन् । यो उनको चतुर्याई हो ।
पहिलो, उनले यो कदमबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउन नदिएर आफ्नो विकल्पमा तत्काल अर्को दलबाट प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने ढोका बन्द गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको दौडमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अगाडि थिए । उनी तत्काललाई रोकिएका छन् ।
दोस्रो, ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा नेकपा एमालेबाट फ्लोर क्रसको सम्भावनालाई लगभग रोकिदिएका छन् । नेकपाका १२१ सांसद नै ओलीलाई विश्वासको मत दिन वाध्य हुने देखिएको छ । यसले नेकपा एमालेको सम्भावित विभाजनलाई पनि रोकिदिएको छ ।
तेस्रो, जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने प्रयास ओलीको रहन्छ । जसपाको २० जना सांसदको मत पाउन सके ओली बहुमत पाउन सफल हुनसक्छन् । उनले गर्ने प्रयासले जनता समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावना रहन्छ ।
चौंथो, ओलीलाई अझैपनि नेकपा माओवादी केन्द्रले दिइआएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । विश्वासको मत लिन अगाडि बढेपछि स्वतः समर्थन फिर्ता लिने नलिने टुंगो लाग्छ । माओवादी विश्वासको मतको विपक्षमा जाने निश्चित छ । यसले ओली कि त अर्को दलसँग सत्ता साझेदार गरेर बढ्न सक्छन् कि त ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
पाचौं, ओलीले चाहेको अर्ली इलेक्शन नै हो । विश्वासको मत लिन नसकेमा अर्को कुनै व्यक्तिले बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना कमजोर रहन्छ । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव घोषणा गर्न सक्छन् । उनी यसअघि प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनाव घोषणाको कदम चाल्न पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी संसद पुनःस्थापनाको निर्णय गर्यो । रिपोटर्स नेपाल
दुबईबाट आउने ५ नेपाली प’क्राउ , गरेछन् यस्तो काम !
चीनको चाहना : एमाले र माओवादी एक भएर कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउन् !
एमाले महाधिवेशनमा यस्तो छ खानाको परिकार !